Nahita mivantana ny fampiofanana natao tany, teny amin’ny Nexta Andranomena, ireo mpisehatra amin’izany noho ny fiaraha-miasa tamin’ny Fondation Telma. Antananarivo, Toamasina, Antsiranana ary Fianarantsoa no nisitraka izany ka nahafahana mifehy ny fisorohana ny aretin’ny taova fandevonan-kanina. Tombony ho an’ny mpisehatra Malagasy ny fizarana traikefa nataon’ireo manampahaizana manokana avy any ivelany tahaka ny fifehezana ny aretin’ny aty, ny fahatavezana loatra, ny hepatita sy ireo maro hafa. Ny firenena afrikanina miteny frantsay no misitraka ity tetikasa Gastrotraining ity ary raha ny eto Madagasikara manokana dia efa napetraka ny fikambanana AGEM (Association des Gastro-Entérologues Malgaches) sy ny SOMAPHYBIOM ahafahana mifehy tsara ny manodidina ny aretin’ny fandevonan-kanina. Fahalalana vaovao indray no azo ary tombony izany, indrindra ho an’ireo mpianatra dokotera Malagasy izay tonga maro nanatrika.